ဦးဖိုးဖြူ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆန္ဒသုခပရဟိတ ဆေးခန်းမှာ ဘီပိုး စီပိုး အခမဲ့ ကုသနိုင်ပါပြီ – Askstyle
ဦးဖိုးဖြူ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆန္ဒသုခပရဟိတ ဆေးခန်းမှာ ဘီပိုး စီပိုး အခမဲ့ ကုသနိုင်ပါပြီ
ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် ဦးဖိုးဖြူ ကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဆန္ဒသုခ ပရဟိတ ဆေးခန်းမှာ အသည်းယောင် အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးကို အဓိကထားကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်
ဦးဖိုးဖြူက ဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ အကြောင်းကို ခုလို ပြောပြပါတယ်. .
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်က ဦးက အသဲယောင်အသားဝါ စီပိုး ရောဂါတော်တော်ပြင်းတယ်. .တော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်. . ဦးတို့ခေတ်တုန်းက အသည်းယောင်အသားဝါ စီပိုးဖြစ်ရင် သိန်း ၃၀၀ လောက်ကုန်မှ ပျောက်တယ်. ..ဦးမှာ ရှိတဲ့ ကားနှစ်စီးကို ရောင်းပြီး ကုခဲ့တဲ့အတွက် ကံအားလျော်စွာ အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်. . .ဒါကြောင့် ဘီပိုး စီပိုးတွေရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိတဲ့အတွက် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ ဘုန်းကြီးတွေ သီလရှင်တွေ၊ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ထောင်အကျဉ်းကျပြီး ပြန်လွတ်လာသူတွေကို ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ ဘီပိုးစီပိုး ကုပေးမှာ လို့ ပြောပါတယ်
သူ့ရဲ့ဆေးခန်းမှာ ရောဂါအတိုင်ပင်ခံဆရာဝန်ကြီးက ရောဂါကို အခမဲ့ စမ်းသပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ၀ယ်ယူသည့်ဆေးဖိုးသာ ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်
ဒေါက်တာ ဇာနည်ဇင် ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ Facebook Page တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ၄င်း Page မှာ ဆေးခန်းဖွင့်မယ့်ရက် အတိအကျကို စုံစမ်းနိုင်တဲ့အပြင် အသေးစိတ်စုံစမ်းလိုပါက ဦးဖိုးဖြူရဲ့ဖုန်းနံပါတ် ဝ၉၅၁၈၃၉၁၇ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. .
ဦးဖိုးဖြူဟာ အ၀စား ၁၅၀၀ တန်ထင်းဆိုင်ကိုလဲ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်
( hlataw )
ရုပျရှငျနှငျ့ ဗီဒီယို သရုပျဆောငျ ဦးဖိုးဖွူ ကိုယျတိုငျဖှငျ့လှဈထားတဲ့ ဆန်ဒသုခ ပရဟိတ ဆေးခနျးမှာ အသညျးယောငျ အသားဝါ ဘီပိုး စီပိုးကို အဓိကထားကုသပေးလကျြရှိပါတယျ
ဦးဖိုးဖွူက ဆေးခနျးဖှငျ့ထားတဲ့ အကွောငျးကို ခုလို ပွောပွပါတယျ. .
“လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈလောကျက ဦးက အသဲယောငျအသားဝါ စီပိုး ရောဂါတျောတျောပွငျးတယျ. .တျောတျောလေးနမေကောငျးဖွဈခဲ့တယျ. . ဦးတို့ခတျေတုနျးက အသညျးယောငျအသားဝါ စီပိုးဖွဈရငျ သိနျး ၃၀၀ လောကျကုနျမှ ပြောကျတယျ. ..ဦးမှာ ရှိတဲ့ ကားနှဈစီးကို ရောငျးပွီး ကုခဲ့တဲ့အတှကျ ကံအားလြျောစှာ အသကျရှငျခဲ့ပါတယျ. . .ဒါကွောငျ့ ဘီပိုး စီပိုးတှရေဲ့ ဆိုးကြိုးတှကေို သိတဲ့အတှကျ ဆငျးရဲနှမျးပါးသူတှေ ဘုနျးကွီးတှေ သီလရှငျတှေ၊ ယုံကွညျခကျြကွောငျ့ ထောငျအကဉျြးကပြွီး ပွနျလှတျလာသူတှကေို ဈေးနှုနျးသကျသကျသာသာနဲ့ ဘီပိုးစီပိုး ကုပေးမှာ လို့ ပွောပါတယျ
သူ့ရဲ့ဆေးခနျးမှာ ရောဂါအတိုငျပငျခံဆရာဝနျကွီးက ရောဂါကို အခမဲ့ စမျးသပျပေးမှာ ဖွဈပွီး ဝယျယူသညျ့ဆေးဖိုးသာ ကုနျကမြှာ ဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ
ဒေါကျတာ ဇာနညျဇငျ ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ Facebook Page တဈခု ဖှငျ့လှဈထားပွီး ၎င်းငျး Page မှာ ဆေးခနျးဖှငျ့မယျ့ရကျ အတိအကကြို စုံစမျးနိုငျတဲ့အပွငျ အသေးစိတျစုံစမျးလိုပါက ဦးဖိုးဖွူရဲ့ဖုနျးနံပါတျ ဝ၉၅၁၈၃၉၁၇ ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ. .
ဦးဖိုးဖွူဟာ အဝစား ၁၅၀၀ တနျထငျးဆိုငျကိုလဲ ဖှငျ့လှဈထားပါတယျ